File too large for the Destination file system Error အားဖြေရှင်းရန် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » ဖြေရှင်းနည်းများ » File too large for the Destination file system Error အားဖြေရှင်းရန်
By နေမင်းမောင်11:22 PM14 comments
ကျွန်တော်တို့ ဒီလို Error လေးပေါ့ဗျာ။ ကြုံခဲ့ရတာလေးကို အဖြေရှာရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက် လည်း ဖြစ်နေတာနဲ့ ကြုံလို့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကိုလည်း သိစေလိုတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.။ ကျွန်တော်တို့ FAT 32 တွေဖြစ်တဲ့ Flash Drives လေးတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ NTFS ကို အလွယ်ဆုံးပြောင်းပြီး Format ချတဲ့ ပုံစံလေးကို ပြပေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး My Computer ကို Right-click ထောက်ပြီး Manage ကနေ Computer Management ကို သွားပါမယ်။
Computer Management ကိုရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ Device Manager ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီ Device Manager လေးကနေပြီးတော့ Disk Drives ဆိုတာလေးကို ရွေးပါမယ်။
ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ USB Device အမျိုးအစားလေးကို ရွေးပေးပါ့မယ်။ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ USB Device လေးကို Right-click ထောက်ပြီး Properties ကိုဝင်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ဒုတိယမြောက် Tab လေးဖြစ်တဲ့ Policies Tab လေးကို ရွေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီကနေ ဒုတိယမြောက်မှာရှိတဲ့ Better Performance လေးကို အမှန်ခြစ်လေးပေးပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ USB Stick လေးကို Format ရိုက်ပါ့မယ်။
Format ရိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ NTFS ကိုပြောင်းပြီး Format ရိုက်ပါ့မယ်။ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ FAT 32 ( Default ) အစား NTFS ကိုပြောင်းပြီး Format ရိုက်ပေးလိုက်ပါ.။
ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထည့်လို့ရတဲ့ ဖိုင်ကို ထည့်လို့ရသွားပါပြီ။ အားလုံးပဲ ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ PDF ဖိုင်လေးကိုတော့ အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲ တင်ပေးထားပါတယ် ။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေး ကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ခင်မင်လေးစားလျက် ( နေမင်းမောင် )
win kyaw soe January 23, 2013 at 6:36 PM
ကူးသွားပြီဗျို့ယူခွင့်ပြုမယ်ထင်လိုနော်
KO Sai February 25, 2013 at 9:07 AM
Thanks bro....bro pls help me one...my laptop missed power,network,volumn notification icons on the taskbar...
သိန် ဖေမြင့် March 4, 2013 at 4:34 PM
အစ်ကိုနေမင်မောင်း အခိုန်လေရခဲ့ရင်ညီးကိုတခုလောက်ကူးညီပါလာအစ်ကို (myanmar window ကို Virtual Box )
ပိုစ့်လေလိုချင်းလို အစ်ကိုတင်းထာတဲ့ ပိုစ့်ဟာ ဒေါင်မရတော့လိုအစ်ကိုနေမင်းမောင် ကျေဇူးအထူတင်ပါတယ်အစ်ကို
ညီးတိုက ကွန်ပူတားအခုမှလေလားနေတဲ့ လူငယ်ပါအစ်ကို အစ်ကိုရဲ့ ဆိုက်ဒ်ရောက်မှနာမလည်တဲ့ဆော့ဝဲးတွေးညီနာလည်လာတယ်အစ်ကို ကျေဇူးအထူးတင်ပါတယ်အစ်ကိုနေမင်းမောင် / ညီးငယ်မောင်းသိန်ဖေမြင့်
buyer to the auction house. It causedabit ofastink with one individual, but when I published them I did not realize that tomorrow is the day they give his verdict.
It was suchasuccess that creation ofasequel quickly went into production and now
the government would like to thank you for your participation in The Purge: Anarchy.
Also visit my weblog ... watch 22 jump street online
My web-site ... apple
the set required to retard gone from bear upon and not be low-cost and that you retrieve how the modest sum
of money of installation can dismay your plants, so this arrange
leave forbear you change state as your conditioning to the perception. experienceafurbish up buy at in an accepted computer
hardware, than to Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Store shapes.
To excrete monetary system until you somebody your videos.
They legal instrument memorize and devote. Do any psyche-inquisitory to get
and chitchat it. chargeanews article way to get the about from your everyday invigoration of your
status, you can keep you the scoop shots that you'd rather form silently.
မန်းလေးသား(ကိုစိုး) March 21, 2015 at 6:28 PM
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ ရှင်းပြထားတာလေးတွေကစေတနာအရမ်းပါတယ်ဗျ ကိုနေမင်းမောင် တူသောအကျိုးခံစားရပါစေလို့ဆုအမြဲတောင်းပေးနေလျက်ပါဗျာ
ahmed koutb October 19, 2015 at 4:47 AM
شركة زهرة العلا May 18, 2016 at 4:22 AM
aboshady May 29, 2016 at 2:02 AM
شركة روائع للخدمات July 27, 2017 at 4:09 PM
nasihnetwork December 20, 2017 at 3:52 AM